यसरी थाहा पाउनुहोस प्रेमीकाको यौ'न चाहना - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
यसरी थाहा पाउनुहोस प्रेमीकाको यौ’न चाहना
प्रेममा शारीरिक सम्बन्धले कति महत्व राख्छ ? यो आ-आफ्नो बुझाई र भोगाइमा निर्भर गर्ने कुरा हो । कतिले ठान्छन्, प्रेम शुद्ध प्रेम मात्र हुनुपर्छ । कतिले यसलाई रो’मान्सको रुपमा लिन्छन् । प्रेमी पनि त कोही आदर्श हुन्छन्, कोही विन्दास । कोही सं’वे’दनसिल हुन्छन्, कोही रोमान्टिक ।
हामी भन्छौं, प्रेममा शारीरिक वासनालाई त्यती महत्व दिनु राम्रो होइन । जब प्रे’ममा मन भन्दा बढी शरीर हावी हुन थाल्छ, केही न केही गडबड सुरु हुन्छ । तर, सबैको हकमा कहाँ यस्तो हुन्छ ?
हरेक प्रेम सम्बन्धमा स्नेह र प्रगाढता त हुनै पर्छ साथसाथै एकअर्कालाई बुझनु पनि जरुरी छ । प्रेमि’का’द्वारा नयाँ कपडा पहिरिएर आएमा उनको प्रशंसा गर्नु, उनको सराहना गर्दै उनको हात चुम्ने जस्ता ससाना कुराहरु सम्बन्धमा मजबुतीको लागि धेरै जरुरी छ ।
प्रेमिकालाई तपाइर्ंले से’क्स’को लागि मात्रै उनलाई चाहनुहुँदैन उनी प्रति तपाईंको लगाव से’क्स भन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ भनेर यस्तै कुराहरुले बताउँछ ।
आजभोली प्रेमको तरिकामा मात्रै होइन यसको मान्यतामा पनि परिवर्तन आइरहेको छ । युवाअवस्थामा विपरि”तिलिंगी प्रतिको आकर्षणले युवायु’वतीलाई एकअर्का बीचमा प्रे’म’को बन्धनमा बाँध्छ । र, विस्तारै भेटघाट, कुराकानी र एकअर्काप्रति समर्पित हुने सम्मको सम्बन्ध बन्छ ।
प्रे’मसम्बन्ध चल्दै गर्दा अहिलेका युवायुवतीहरु एकान्त भेट्नसाथ यौन सम्बन्ध बनाउन डराउँदैनन् । यस्तोमा युवक से’क्स’को लागि छिटो तयार हुन्छ र से’क्स’को लागि तत्पर हुन्छ भने प्रेमीकाहरुको संकेत शारीरिक सुखमात्रै नभएरसबै पलहरुको रोमाञ्चकतालाई समेट्ने तर्फ हुन्छ ।
यस्तोमा प्रेमीले शारीरिक सम्बन्ध बनाइसके पछि आफ्नो प्रेम सकिएको सम्झिन्छ भने प्रेमीकाले शा’रीरि’क सम्बन्ध कायम भइसकेपछि झनै दिलो ज्यानले एकअर्कालाई चाहने, मिठोमिठो कुरा गर्ने, छेडछाड र सेक्सपछि पनि प्रेमीको अंगालोमा बाँधिदा भाग्यमानी सम्झिने गर्छिन् ।
प्रेमीकाहरु भावनाहरुलाई प्रेमको अभिव्यक्ति सम्झिछन् साथै उनीहरु प्रेमीले आफ्नो यौ’न चाहनालाई आँफै बुझोस र मायालु व्यवहार गरोस भन्ने चाहन्छन् ।
धेरै युवतीहरुले उनीहरुको यौ’न चाहनाहरुलाई प्रेमीले आँफै बुझोस् भन्ने चाहन्छन् । नर्थ’वेस्टर्न युनिभर्सिटी इलिनोयसको से’क्सु’अलिटी कार्यक्रमको थेरापिसस्ट पामेला श्राफ भन्छिन्, ‘धेरैजसो प्रेमीले आफ्नो प्रेमीकाको यौ’न’चाहनालाई प्राथमिकता दिन चाहँदैनन् ।’
युवतीहरु से’क्स’मात्रै होइन एक रोमान्टिक माहौल चाहन्छन्
युवती’हरुलाई आनन्ददायक सेक्स लाइफको लागि यौ’नसम्पर्क मात्रै होइन आफ्नो प्रेमीको साथमा बिताएको हरेक क्षणमा रोमान्टिक पलहरु र मायालु व्यवहारको पनि आवश्यकता हुन्छ ।
युवतीहरुलाई आफ्नो प्रेमीले बाहिर भेट्दा पढाई, करियरको मात्रै कुरा गरेको र फेरि एकान्तमा भेट्नसाथ से’क्स’को चाहना गरेको कहिल्यै पनि मनपर्दैन ।
यदि प्रेमीले यस्तो मात्रै गर्छ भने युवतीहरुको मनमा आँफू उनीहरुको यौ’न इच्छा पुरा गर्ने एक खेलौनामात्रै भएको जस्तो भावना आउँछ । यस्तोमा उनीहरु आफ्नो प्रेमीलाई धेरै स्वार्थी र आँफैलाई भोगको वस्तु सम्झिन थाल्छिन् ।
हरेक प्रेमीकाले आफ्नो प्रेमीले केवल से’क्स’को लागि मात्रै होइन बरु मनैदेखि धेरै माया गरोस् भन्ने चाहन्छन् । आफूलाई धेरै ध्यान देओस् भन्ने चाहन्छन् त्यसैले उनी सँग आफ्ना कुराहरु सेयर गर्नुहोस्, प्रेमपूर्वक कुराहरु गर्नुहोस् र उसको भावनाहरुलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् ।